Safari guide killed by lion in Zimbabwe - AOL News
Aug 25th 2015 5:38AM
Africa, Zimbabwe, Hwange National Park, Mother And Baby Elephant. (Photo by Education Images/UIG via Getty Images)
(GERMANY OUT) Zimbabwe Matabeleland North Hwange National Park - A herd of wildebeest (Connochaetes taurinus) (Photo by Forster/ullstein bild via Getty Images)
A lioness is pictured on November 18, 2012 in Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
An African elephant and her baby are pictured on November 18, 2012 in Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
An African elephant is pictured on November 19, 2012, in Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
Painted dogs are pictured on November 19, 2012 in Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
A giraffe walks next to vultures on November 17, 2012 at Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
Birds are pictured near a strech of water, on November 17, 2012 in Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
An African elephant is pictured on November 18, 2012 in Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
A giraffe is pictured on November 16, 2012 at Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
A tree is pictured on November 16, 2012 at Hwange National Park in Zimbabwe. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)
Posted by Camp Hwange on Monday, August 24, 2015